CBD Saliidu ma tahay mid balwad leh? Mise Kaliya Ka Soo Horjeeda? • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn CBD Saliidaha saliida CBD miyuu yahay? Ama kaliya ka soo horjeedda?
albaabka daroogada 30 Oktoobar 2019
maqaal by daroogada 30 Oktoobar 2019
Faa'iidooyinka la sheegayo ee CBD aad bay u faafeen, waxaana jira cilmi-baaris sii kordheysa oo lagu taageerayo. Daraasaduhu waxay muujiyeen in CBD ay leedahay sifooyin anti-bararka iyo ka-hortagga suuxdinta waxayna xitaa muujisay awoodda lagu yareeyo walaaca bulshada.
1 CBD ma qabatimay?
1.1 Waxaa jira laba darajo loogu talagalay dhirta xashiishadda ee soo saarta CBD: marijuana iyo hemp.
2 CBD waxay gacan ka geysan kartaa la-dagaallanka maandooriyaha
3 Saamaynta dhinaca saliidda ee CBD
Ka dib sharciyeynta wax soo saarka hemp warshadaha, oo ka dhacday ogolaanshaha Xeerka Beeraha ee 2018 ee Mareykanka, iyo qulqulka badan ee alaabada CBD ee soo galaya suuqa, dad aad u tiro badan ayaa bilaabay inay ka fekeraan: maxaa loo adeegsadaa CBD ?
Ka baxsan Maraykanka, wadamada kale ee adduunka ayaa bilaabay inay oggolaadaan cannabidiol (CBD) in si sharci ah loogu isticmaalo gudaha xuduudahooda. Kanada gudaheeda, ka dib markii la ansixiyay sharciga xashiishadda, kaas oo sharciyeeyay xashiishadda dadka waaweyn, labadaba hemp-derived iyo marijuana-ka soo jeeda CBD ayaa laga heli karaa dhammaan gobollada. Midowga Yurub (EU) ayaa sidoo kale sameeyay hagitaan sharci oo loogu talagalay saliidda hemp-ka soo jeeda ee CBD, taas oo u oggolaanaysa hemp in la beero waa haddii maadada THC aysan ka badnayn 0,2%.
Tiro ka mid ah dalalka Koonfurta Ameerika ayaa sidoo kale qaaday xayiraadaha ka dhanka ah saliidda CBD iyo marijuana caafimaad guud ahaan. Mexico iyo Brazil labaduba waxay hadda u oggol yihiin in wax soo saarka CBD loo soo dhoofiyo xaalado caafimaad oo gaar ah, halka waddamada kale, sida Chile, ay horay u sameeyeen barnaamij marijuana caafimaad oo buuxa.
Laakiin dadka qaarkiis wali way diidi karaan inay siiyaan tallaalkan cannabinoid aan sakhraansanayn, maxaa yeelay waxay leeyihiin aragti been ah oo ah in CBD ay abuuri karto nooc la mid ah saamaynta nafsaaniga ah sida THC, dhigga sakhraansan ee CBD ee keena "sare" iyo ugu badan cannabinoid geedka xashiishka.
Sida THC, markay la falgaleyso nidaamka endocannabinoid, CBD waxay kuxirantahay qabtayaasha CB1, kuwaas oo inta badan lagahelo nidaamka dhexe ee neerfaha halkaasoo ay kushaqeeyaan shaqada maskaxda, iyo qabtayaasha CB2, oo kujira unugyada difaaca jirka. Laakiin marka isdhexgalkaani ka dhaco heerka molikiyuulka, CBD waxay sameysaa ka soo horjeedka waxa THC ay sameyso.
In kasta oo THC loo tixgaliyay agonist for CB1 receptors, CBD waxay cadeysay inay tahay agonist dhanka kale ah. Si kale haddii loo dhigo, THC waxay ku dhaqaaqdaa qaabilaadahan, laakiin CBD ma aysan dhicin. Si kastaba ha noqotee, waxay la falgashaa dariiqooyin kale oo bayooloji oo kala duwan waxaana la soo sheegay inay bixiso faa'iidooyin daaweyn ah sida anti-bararka.
Si loo tirtiro macluumaadka khaldan iyo in si habsami leh xog ogaal u ahaanshaha loo helo, waxaa muhiim ah inaan saxno diiwaanka ama in CBD ay leedahay astaamo qabatin.
CBD ma qabatimay?
Jawaabta oo kooban, oo fudud waa maya. CBD ma aha wax qabatin u leh heerka moodeelka mana soo saarin wax loogu yeero dhagxaanta loo yaqaan 'THC'.
Daraasad bishii Marso 2017 oo lagu daabacay joornaalka 'Journal of Drug and Alcohol Dependence' ayaa baaray tan iyadoo lagu maareynayo qiyaaso kala duwan oo afka laga qaato oo ah CBD si loogu adeegsado marijuanayaasha keligood iyo marka lagu daro xashiishadda la cabo ee sigaarka, taas oo kujirta 5,3% ilaa 5,8% THC. Kadib falanqaynta astaanta xadgudubka ee 'CBD' marka la barbar dhigo placebo afka laga qaato iyo marijuanaad firfircoon, kooxda cilmi-baarista waxay soo gabagabeeyeen in CBD aysan soo bandhigin wax calaamado ah oo sheegashada xadgudubka ah.
Waxaa muhiim ah in la aqoonsado in xitaa THC aysan sababi karin isla heerka calaamadaha ka bixitaanka jirka sida opiates ama aalkolo, laakiin isticmaalka xashiishka ee daba dheeraada wuxuu sababi karaa khalkhalka isticmaalka xashiishadda (CUD). Xaaladdani waxay sababtaa astaamaha ka bixitaanka xashiishadda ee ka dhasha horumarka ku tiirsanaanta, taasoo keenta astaamo lagu tilmaami karo inay la mid yihiin ka noqoshada nikotiinta. In kasta oo astaamaha ka-noqoshada xashiishku jiraan, haddana waxay inta badan ku kooban yihiin dareenka walaaca, kacsiga, niyadda xun iyo khalkhalka hurdada.
Maaddaama alaabooyin badan oo CBD ay ka kooban yihiin heerar kala duwan oo THC ah, arrintu way xoogaa adag tahay markaan weydiinno su'aasha xoogga badan, 'Saliida CBD ma tahay mid balwad leh?' Marka hore waa inaan baarnaa horudhac: halkee ayuu CBD ka yimaadaa?
Waxaa jira laba darajo loogu talagalay dhirta xashiishadda ee soo saarta CBD: marijuana iyo hemp.
CBD oo ka timaadda dhirta hemp waxaa ku jira wax yar oo aan raad lahayn oo ah THC (in ka yar 0,3% marka loo eego sharciga federaalka ee Mareykanka), sidaa darteedna shakhsigu waa inuusan halis ugu jirin astaamaha ka-noqoshada xashiishadda taasoo ka dhalan karta qaadashada culus ee THC.
CBD-ka laga soo saaro Marijuana waxaa laga soo saaraa dhirta marijuana sida caadiga ah waxaa loogu beeraa astaamahooda maandooriyaha ah. Si ka duwan CBD-ga hemp-ka laga soo saaray, saliida CBD-ka laga helo marijuana inta badan waxay ka kooban tahay heerar THC ah oo ka sarreeya xadka sharciga ee 0,3% ay dejisay dowladda Mareykanka. Haddii ay dhacdo in saliidda CBD ay leedahay waxyaabo gaar ah oo sarreeya oo THC ah, shaqsi ayaa laga yaabaa inuu la kulmo astaamaha ka bixitaanka sida xashiishadda haddii si xad dhaaf ah loo isticmaalo. Laakiin saliida CBD ee leh heerarka THC ee ka sarreeya 0,3% waxaa kaliya laga heli karaa wadamada leh sharciyeynta xashiishadda ee loogu talagalay isticmaalka daawada ama dadka waaweyn.
Daraasad 2011 ah ayaa lagu soo gabagabeeyey in CBD ay leedahay muuqaal badbaado oo ka wanaagsan THC iyo cannabinoids kale. Cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in qiyaasta sare ee CBD ee ilaa 1500 milligram maalintii ay si fiican u dulqaadanayaan maadooyinka bini'aadamka. Marka la barbar dhigo THC, CBD si xun uma saameyn dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa ama hawlaha nafsaaniga ah, mana beddelin garaaca wadnaha, cadaadiska dhiigga ama heerkulka jidhka. Muuqaalkan badbaadada ee la wanaajiyay waxa laga yaabaa inay tahay natiijada ka dhalatay CBD u dhaqanta sidii agonist-ka rogan ee soo-dhowaynta cannabinoid ee jidhka.
In kasta oo dhammaan calaamadaha ay muujinayaan in CBD aysan ahayn wax balwad ah, haddana waxaa suuragal ah in qof adeegsada xaddi badan oo CBD maalin kasta la kulma dhibaatooyin kale sida isbeddelada hurdada, caabuqa iyo welwelka haddii ay si lama filaan ah u joogsadaan.
Si kastaba ha noqotee, tani macnaheedu maahan in saliida CBD ee leh heerar sare THC waa in laga fogaadaa, maadaama isku darka CBD iyo THC la muujiyey inay si wada jir ah u shaqeynayaan si ay u soo saaraan saameyn weheliya oo kordhisa faa'iidooyinka daaweynta isla markaana xakameynaya dhibaatooyinka soo raaca. Tusaale ahaan, daraasad 2010 ku lug leh bukaanno qaba xanuunka kansarka, cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in isku darka THC iyo CBD ay waxtar badan u leedahay daaweynta xanuunka marka loo eego isku darka THC iyo placebo.
CBD waxay gacan ka geysan kartaa la-dagaallanka maandooriyaha
Waxaa jira cadeymo qaar in CBD sidoo kale loo isticmaali karo in lagu caawiyo la dagaalanka saameynta xun ee THC, sida astaamaha ka bixitaanka xashiishadda. Warbixin ka timid 2013, cilmi baarayaashu waxay ku maareeyeen CBD haweeney 19-sano jir ah oo leh cilladda ka-qaadista xashiishka (CUD) muddo toban maalmood ah, taasoo si wax ku ool ah u keentay astaamaha ka-noqoshada. Daraasad kale, oo la sameeyay 2010 laguna daabacay Neuropsychopharmacology, ayaa baartay wadarta dadka isticmaala xashiishadda 94 si loo arko doorka saamiyada CBD-THC ay ka ciyaareen kordhinta saameynta daawooyinka iyo feejignaan la'aanta dareenka daroogada. Marka la barbardhigo dadka sigaarka caba ee noocyada CBD-da leh wax yar oo CBD ah, daraasadda ayaa lagu ogaaday in dadka sigaarka caba ee noocyada CBD-da ee leh wax yar oo CBD ah ay fiiro gaar ah u yeeshaan daroogada iyo kicinta cuntada, iyo sidoo kale isku kalsooni hoose ee xashiishka cannabis. Kooxda cilmi-baarista waxay soo gabagabeeyeen in "CBD ay leedahay awood daaweyn ah oo loogu talagalay qabatinka xashiishadda" oo laga yaabo inay bixiso daaweyn suurtagal ah oo loogu talagalay xaaladaha kale ee balwadda ah
Cilmi baaris jirta ayaa sidoo kale muujineysa in saliida CBD ay hor istaagi karto qabatinka walxaha kale ee halista ah, sida tubaakada ama opioids. Daraasad 2013 lagu daabacay Dabeecadaha Maandooriyaha ayaa eegay waxtarka CBD iyada oo ah hab lagu yareeyo isticmaalka sigaarka tubaakada. Markay indha indheynayeen wadarta 24 dadka sigaarka caba, cilmi baarayaashu waxay siiyeen kala bar maadooyinka maadada CBD iyo qeybta kale placebo, waxayna ku amreen inay isticmaalaan qalabka neefsashada marka ay dareemaan baahida sigaarka. Muddo hal usbuuc ah, kuwa lagu daweeyay CBD waxay yareeyeen tirada sigaarka ay cabaan 40%, halka kuwa ku jira placebo muu muujin faraq muuqda.
CBD waxay sidoo kale muujisay astaamo waxtar leh daaweynta walxaha kale ee balwada leh. Daraasad xayawaan horay loo sii daayay oo la daabacay Maarso 22, 2018 ee Neuropsychopharmacology, cilmi baarayaashu waxay adeegsadeen CBD gel jiirka sheybaarka oo lahaa taariikh khamri ikhtiyaari ah ama isticmaalka kookeynta oo soo bandhigay dabeecado balwado leh. Daraasadu waxay soo gabagabeysay in CBD ay wax ku ool u leedahay yareynta isticmaalka daroogada iyo sidoo kale hoos u dhigista saameynaha caadiga ah ee daroogada maandooriyaha, sida walaaca iyo dareenka.
Cannabinoid aan sakhraansaneyn ayaa sidoo kale muujisay ballan qaad ku saabsan moodooyinka aadanaha. Daraasad May 2019 ah oo lagu daabacay joornaalka Mareykanka ee cilmu-nafsiga ayaa lagu ogaaday in CBD ay waxtar u yeelan karto yareynta damaca mukhaadaraadka hirowiinka. Si loo sameeyo daraasadda, cilmi baarayaashu waxay qoreen 42 qof oo qaangaar ah oo isticmaalay heroin celcelis ahaan 13 sano. Mawduucyada waxaa loo qaybiyay saddex kooxood: hal koox ayaa heshay 800 oo miligram oo CBD ah, 400 miligram oo kale oo CBD ah iyo mid kale oo ah placebo. Marka loo barbardhigo placebo, kuwa helay CBD waxay si weyn hoos ugu dhigeen damacii iyo walwalka ay keeneen astaamaha daroogada.
Saamaynta dhinaca saliidda ee CBD
Waxaan ogaanay in CBD aysan ahayn wax qabatimo ama maandooriye, waxaana laga yaabaa inay yareyso astaamaha ka bixitaanka xashiishadda iyo ku tiirsanaanta maandooriyaha kale, laakiin ma jiraan waxyeellooyin soo raaca oo saliidda CBD ay iska ilaaliso?
Sida laga soo xigtay Mayo Clinic, xarunta caafimaadka ee tacliinta sare ee Mareykanka, isticmaalka CBD wuxuu sababi karaa waxyeelo fudud oo fudud, oo ay kujiraan af qallalan, shuban, cunto xumo, lulmo, iyo daal. Daraasad ku saabsan CBD hepatotoxicity ee jiirka shaybaarka, cilmi baarayaal ka tirsan Jaamacadda Arkansas ee sayniska caafimaadka ayaa ogaaday in kansarka aan sunta lahayn ee cannabinoid uu kordhiyay halista sunta beerka. Dawada suuxdinta ee Epidiolex, oo hadda ah tan kaliya ee Mareykanku ansixiyay iyo wax soo saarka CBD-ga ee suuq-geynta CBD, waxay leedahay waxyeelo qaarkood oo lamid ah alaabada kale ee CBD ee hemp-ka laga helo.
Welwelku waa saamaynta xun ee ay CBD ku yeelan karto dawooyinka dhakhtarku qoro, sida kuwa dhiigga ka fikira.
Daraasad 1993 ah ayaa lagu ogaaday in CBD ay xannibtay qoys enzymes ah, cytochrome P450, kuwaas oo mas'uul ka ah in nidaamka laga tirtiro 70% ilaa 80% daawooyinka dawooyinka. Baarayaasha waxay ogaadeen in CBD ay xannibtay enzymes-kan in la jajabiyo oo beerka lagu shiido. In kasta oo balooggan u oggolaan karo bukaanjiifka in ay qaataan qadar yar oo ka mid ah daawooyinka la qoro, waxay sidoo kale sababi kartaa sun sun ah oo ku soo kordha kiimikada dawada ee jirka ku jirta.
Inta badan dhibaatooyinka soo raaca ee saliida CBD, sida lulmo iyo daal, waxay la mid yihiin waxyeelada saliida hemp, inkasta oo sheygan fiber-ka laga soo saaray hemp badanaa uusan ku jirin CBD ama THC. Waxyaabaha aan ka ahayn saameyntan fudud, ma jiraan wax la yaqaan oo ah astaamaha ka-noqoshada CBD - iyo faa'iidooyinka ayaa u muuqda inay ka miisaan culus yihiin dhibaatooyinka.
Ma tixgelinaysaa inaad laf ahaantaada u isticmaasho CBD? Haddii aad durba daawo qaadatid, waxaa dabcan had iyo goor lagu talinayaa inaad marka hore la tasho takhtarkaaga.
Ilo ay ka mid yihiin 420Intel (EN), CBDSchoolEN), GreenEnt ganacsur (EN), Khariidadaha Weed (EN)
AmericaCBDsaliid cbdEuropacaafimaadkaxagashasharci ahaansharci-dejintadaawodaawada cawskaNederlandcilmi baarisTHCMaraykankaqabatinkaAdduunka oo dhansaliida cannabis
Cab: tallaabada xigta ee xashiishada...
Xashiishad daawo ah ayaa waxaa isticmaala dumar aad u badan...